पक्राउ पर्दै छुट्दै – 701102 | Bishow Nath Kharel
पक्राउ पर्दै छुट्दै – 701102
काठमाडौ, फाल्गुन १ –
महाराजगन्ज क्षेत्रमा गुन्डागर्दीको एकछत्र पकड बनाएका तेजेन्द्र गुरुङलाई प्रहरीले २ साताअघि पक्राउ गर्‍यो । उनीमाथि हाउजिङ कम्पनी, ठेकेदार र व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको आरोप छ ।
महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तको हिरासतमा रहेका उनलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाइएको छ । वृत्तका डीएसपी प्रभु ढकालका अनुसार त्यस क्षेत्रमा ७ देखि १० जना गुरुङका लागि काम गर्छन् । सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार ७ दिन थुनामा बसिसकेका उनी १८ दिनपछि छुट्ने छन् र सम्भवतः पुनः गुन्डागर्दीमै लाग्नेछन् ।
यसअघि पनि उनी ८ पटक पक्राउ परेर सार्वजनिक अपराधमा हिरासत बसेर छुटेका थिए । ३३ वषर्ीय तेजेन्द्र पक्राउ पर्दै छुट्ने एक उदाहरण हुन् । राजधानीलाई अपराधको केन्द्रबिन्दु बनाएका गुरुङ जस्ता एक दर्जनभन्दा बढी गुन्डा पक्राउ पर्दै छुट्दै पुनः सोही काममा फर्किएका छन् ।
जानकारहरू कमजोर कानुन र राजनीतिक दबाबलगायत कारणले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । पूर्वगृहसचिव नवीन घिमिरेका अनुसार कमजोर कानुनका कारण गुन्डाहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन् । ‘जे अपराध गर्‍यो त्यसैमा सजाय हुने हो तर कति पटक गर्‍यो भन्ने कुरा फरक हो,’ उनी भन्छन्, ‘जे उद्देश्यले अपराध गरे पनि कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय दिन सकिंदैन ।’
घिमिरे गृहसचिव छँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको गुन्डागर्दी नियन्त्रण ऐन गृहबाट परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेर थन्किएको छ । त्यो कार्यान्वयनमा आए गुन्डागर्दी कम हुने उनको विश्वास छ ।
राजनीतिक दलसँग गुन्डाको साँठगाँठ तोड्न सकेमात्र पनि राजधानीको गुन्डागर्दी निकै कम हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
हाल आफूलाई राप्रपा नेपालको कार्यकर्ता बताउने दीपक मनाङे ९ पटक पक्राउ परिसकेका छन् । ०५९ सालमा डाँका अभियोगमा समातिएका उनीसँग गोली प्रहार र कुटपिटजस्ता दर्जनौं अपराधका फेहरिस्त जोडिएका छन् ।
ललितपुरमा गुन्डागर्दी गर्दै आएका मीनकृष्ण महर्जन कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन् । एक महिनाअघि एमालेका रमेश बाहुन भन्ने सुजन पौडेलले घरअघि नै उनलाई गोली हानेर तर्साएका थिए । सिँचाइको ठेक्कामा गुन्डा भाग नदिएका कारण महर्जनमाथि बाहुन समूहले गोली चलाएको थियो । चरी भनिने दिनेश अधिकारी एमाले र कुमार घैंटे कांग्रेस निकट हुन् ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश खरेलले भने आफू गुन्डागर्दीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले भने, ‘त्यस्ता अपराधीसँग सम्पर्क राख्ने प्रहरी अधिकारी पनि कारबाहीको भागीदार बन्नेछन् ।’
को ? कतिपटक पक्राउ ?
दीपक मनाङे ९
तेजेन्द्र गुरुङ ८
घैंटे भन्ने कुमार श्रेष्ठ ६
दिनेश अधिकारी ‘चरी’ ६
रावणजित तामाङ ६
रोज राणा ५
चक्रे मिलन गुरुङ ५
लुमडी कार्की ३
‘बाघे’ शुक्रबहादुर लामा ३
दावा लामा ३
राजु गोर्खाली २
साजन महर्जन २
प्रकाशित मिति: २०७० फाल्गुन २ ०९:५२
Source : http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=314630